WOWOW 8 Inch 4 Hole Centerset Bridge Faucet Kitchen Kitchen miaraka amin'ny Side Sprayer, Oil Rubbed Bronze - Best Kitchen Faucets 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucet an-dakozia an-dakozia / WOWOW 8 Inch 4 Hole Centerset Bridge Faucet ao anaty famafazana, alimo vita amin'ny solika
WOWOW 8 Inch 4 Hole Centerset Bridge Faucet ao anaty famafazana, alimo vita amin'ny solika
Fananganana varahina mafy - Ny faucet tetezana afovoany mavesatra dia vita amin'ny varahina mafy ary milanja 7.76 Ibs. Ny fantsom-boaloboka ao an-dakozia miaraka amin'ny famaranana nikela borosy dia harafesina, harafesina, mahazaka rano, ary miantoka ny fiarovana ny rano sy ny androm-piainana lava.
Faucet ao an-dakozia roa - Ny faucet an-dakozia an-dakozia dia misy endrika 2-tantanana ary misy hosotra famatsiana (hatsiaka sy mafana), izay afaka manampy amin'ny fifehezana tsara ny habetsahan'ny rano sy ny mari-pana. Ny fantsom-panafody mihodina 360 ° mahery dia mety tsara ho an'ny milentika indroa ihany koa.
Mpamafa amin'ny sisin'ny varahina misy fantsona misintona - Miaraka amin'ny tsindry bokotra iray, ny sprayer amin'ny lafiny varahina avo lenta dia afaka manondraka rano mikoriana mafy hanadiovana lovia sy loto ao an-joro. Ny hosotra tafiditra dia azo sintonina hatramin'ny 59 santimetatra, izay manamora ny fanadiovana na aiza na aiza tianao.
Easy Installation - Ny faucet an-dakozia varahina fahagola dia fanampiana tsara ho an'ny lakoziananao. Ny faucet an-dakozia antitra dia miaraka amin'ny fitaovana ilaina rehetra sy ny torolàlana ho an'ny mpampiasa, izay manamora ny fametrahana amin'ny 30 minitra.
Serivisy ho an'ny mpanjifa - lakozia tetezana 8 mirefy mankafy ny fiverenana voafetra 90 andro sy fiantohana 5 taona. Raha misy ny fanontaniana momba ny faucet tetezana varahina, azafady aza misalasala mifanerasera aminay, dia faly izahay manolotra vahaolana.
ABS Aerator azo esorina
Sasafo azo esorina ABS, tsy ilaina fitaovana.
Rano toy ny sombin-javatra, malefaka sy sariaka amin'ny hoditra, tsy misy famafazana, fanasana tsy misy ahiahy
Sivana maro sosona, escort ho an'ny fahasalamana, fitsitsiana rano mihoatra ny 30%
Fanadiovana malefaka amin'ny rantsan-tànana mba hanala mora foana ny refy sy ny kalsioma.
Ny faucet varahina miisa 2 dia manampy anao hifehy ny mari-pana amin'ny rano sy ny fikorianan'ny rano.
Famolavolana haingo tsy manam-paharoa sy tsara tarehy, feno fomba Retro sy fahaizany maoderina, dia tsy isalasalana fa hitondra fisongadinana mahavariana ho an'ny lakoziananao.
Miaraka amin'ny tsindry bokotra, ny sprayer amin'ny lafiny varahina avo lenta dia afaka manapoka rano mikoriana mafy hanadiovana lovia sy ny loto eo an-jorony, manome fahafaha-miasa bebe kokoa amin'ny fiasana ao amin'ny fitoeran-dakozia.
Cartridges varahina mafana sy mangatsiaka kalitao
Vita amin'ny varahina sy seramika, mateza ary mateza tanteraka.
Sivana namboarina, anti-drip roa. Valiny haingana, tsy mora amin'ny fahanterana.
50,000 XNUMX heny ny fitsapana on / off, tsy misy mitete na tsy mitete, azo ampiasaina mandritra ny taona maro.
Solid Brass Material-adidy mavesatra
Vita amin'ny varahina matevina premium ary milanja 7.76 Ibs, adidy mavesatra ary maharitra.
Varahina - mahatohitra ny harafesina sy ny harafesina.
Izy io dia fitaovana avo lenta ampiasaina amin'ny lakozia sy ny vokatra fandroana, izay mampihena ny votoatin'ny rano avy amin'ny loharano hahazoana antoka ny rano salama.
Ampahany : 23115A1RB Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucet an-dakozia an-dakozia Tags: faucet tetezana, Volon-tsolika voahosotra menaka
17.5 x 13.2 x 2.6 santimetatra